Jaamacadda Muqdisho oo Toddobaadka Dhaqanka u soo gabgabeysay in ka badan 15,00 arday oo Jaamacadda kusoo biiray
Jaamacadda Muqdisho ayaa waxay Khamiistii u soo gabagabeysay 1500 oo arday barnaamij loogu magacdaray toddobadka dhanka ee jaamacadda Muqdisho oo loo qabto ardayda cusub ee jaamacadda kusoo biira si loo baro dhaqanka iyo maamulka jaamacadda.
Ardaydan oo horay looga qaaday imtixaanaadkii ogolaanshaha waxbarashada jaamacadda Muqdisho ayaa waxay toddobaadka dhaqanka loogu soo bandhigay shuruucda waxbarashada ee jaamacadda iyo weliba habka ay jaamacaddu ku shaqeyso si ay wax badan uga ogaadaan inta waxbarashada billlaabin.
"Waxaa wanaagsan in ardayga uu akhlaaq wanaagsan ku daro cilmiga uu baranayo, haddii taas uu sameyn waayana ma gaarayo heerkii laga rabay," ayuu yiri Dr Cali Sheekh Axmed Abuubakar oo ah guddoomiyaha jaamacadda Muqdisho. "In howl aad sameysay ay najaxdo waxay ku xiran tahay kalsoonida lagu siiyo."
Guddoomiyuhu oo hadalkiisa sii wata ayaa mar kale yiri: "Hoggaamiye kasta waxaa lagu dhisay waxay ummadi rumeysan tahay. Qofkii wax ka baxsan la yimaada ma lagu tilmaami karo hoggaamiye, sidaad darteen jaamacadda Muqdisho waxay soo saaraysaa hoggaamiye dhab ah oo xambaarsan farriin ku saleysan wadatashi iyo walaanimo."
Dr. Cali Sheekh wuxuu hadalkiisa kusoo gabagabeeyay in tacliintu ay tahay sida geed ama ubax la beero. Sidaa darteed waa in la siiyaa biyo illaa inta uu xoog yeelanayo, waana taas ujeeddada ay jaamacadda Muqdisho hiigsanayso.
Madaxa ardayda jaamacadda Muqdisho, Ustaad Maxamuud Sheekh Cali ayaa soo dhaweeyay ardayda ka qaybqaadatay toddobaadka dhaqanka, isagoo kula taliyay inay dulqaad u yeeshaan waxbarashada muddada ay jaamacadda dhiganayaan.
"Ku fekera inaad sannadaha soo socda ku gaartaan waxbarasho samir iyo dulqaad leh," ayuu ku Ustaad Maxamuud Sheekh ardaydii barnaamijka ka qayb-qaadanaysay isagoo raaciyay hadalkiisa: "Ka saara niyaddiinna tahriib, buufis iyo wixii la mid ah."
Ugu dambeyn, 1500 arday ee ku biiray jaamacadda Muqdisho ayaa waxaa siyaabo kala duwan dardaaran ugu jeediyay macallimiinta, hormuudyada iyo maamulka guud ee jaamacadda Muqdihso, iyagoo kula dardaarmay inay dhexda u xirtaan muddada waxbarashada.